Nikaragoa - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Nicaragua)
República de Nicaragua ((es))
Repoblikan'i Nicaragua ((mg))
Teny filamatra : En Dios Confiamos
(Matoky an'Andriamanitra izahay)
Tanàna ngeza indrindra Managua, León, Granada
- Rano (%) faha 95
- hakitroka faha 131
5 785 846 mpo.
Anaran'ny mponina Nicaraguaianina
IDH (2005) Mihakatra 0,710 (moyen) faha 118
Sandam-bola Córdoba Volamena Endrika:Exp (NIO)
Hiram-pirenena Salve a ti
Ny Nikaragoa dia firenen' i Amerika Afovoany. Voafaritr' i Kôsta Rika izy any atsimo ary i Hôndorasy any avaratra. Manana morontsiraka amin' ny Ranomasimbe Pasifika sy amin' ny Ranomasin' ny Karaiba izy.
Zanatany espaniôla ny Nikaragoa tamin' ny taona 1524, lasa firenena manam-pahaleovantena i Nikaragoa hatry ny 15 Septambra 1821 ary nikambana tamin' ny Faritany Mikamban' ny Amerika Afovoany (Provinces unies d'Amérique centrale). Niala tamin' ilay fikambanana izy tamin' ny taona 1838 ary lasa repoblika mizaka tena tamin' ny ytaona 1854.
Ny sarintan' i Nikaragoa sy ny farihiny roa: farihy Managua sy farihin' i Nicaragua. Ny morontsiraka andrefana no tena be tanàna indrindra
I Nikaragoa dia manana velarantany mirefy 129 494 km² ary 10 254 km² amin' ireo no tany. Miisa 5,8 tapitrisa eo ho eo ny mponina.
Firenena be tendrombohitra i Nikaragoa, ny tany lemaka eny amorontsiraka (Karaîba sy Pasifika) dia miakatra tsimoramora any amin' ny tandavan-tendrombohitra anivo (vita dilatra) hatrany amin' ny tendro Mogoton (2 438 m). Any avaratra no misy ny tendro farany avo indrindra, akaikin' ny sisintan' i Hôndorasy. Misy zetra ny any amin' ny sisin-tany atsimo.
Ny tany lemaka amin' ny morontsiraka pasifika dia be afotroa, indrindra eo amin' ny cordillère-n'ny Maribios, misy ny farihin' i Nicaragua (na Cocibolba) sy ny farin' i Managua. Misy nosy maro ao amin' ny farihin' i Nicaragua, toy ny nosin' afotroan' i Ometepe sy ny tambanosin' i Solentiname. Ny 7 %'ny velarantan' i Nikaragoa dia velaran' ny farihy.
Repoblika ara-parlemanta i Nikaragoa, iray ihany ny isan' ny efitra (Antenimieram-pirenena)
Solombavambahoaka miisa 93 no manan-tseza eo amin' ny Antenimieram-pirenena, mitondra mandritry ny efa-taona ny filoha lany.
Toe-karena[hanova | hanova ny fango]
sokajy Nikaragoa ao amin'ny dmoz
((es)) Gouvernement du Nicaragua Archived Mey 8, 2010 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikaragoa&oldid=1041150"
Voaova farany tamin'ny 6 Desambra 2021 amin'ny 11:36 ity pejy ity.